musha More Boxers Bio Canelo Alvarez Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yePro Boxer, inonyanya kuzivikanwa se “Canelo".
Yedu vhezheni yeCanelo Alvarez's Biography, kusanganisira Nyaya yake Yehudiki, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva panguva yehujaya hwake kusvika ave nemukurumbira.
Canelo Alvarez Biography - Kubva paMakore ake ekutanga kusvika panguva yeMukurumbira.
Ongororo yeCanelo Alvarez's Biography inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu mukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya.
Zvikuru, Mukadzi waCanelo, hupenyu hwepauzima, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe weakanakisa counterpunchers muhunyanzvi tsiva.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveCanelo Alvarez's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Canelo Alvarez's Childhood Nyaya:
Kutanga, Santos Saul Alvarez Barragan akazvarwa pazuva regumi nemasere raChikunguru 18 kuguta reGuadalajara muJalisco, Mexico.
Akanga ari gotwe pavana 8 akaberekwa naamai vake Ana Maria Barragan uye kuna baba vake Santo Alvarez. Tarisai, vabereki vaCanelo Alvarez.
Sangana nevabereki vaCanelo Alvarez - amai vake, Ana Maria Barragan, uye baba Santo Alvarez.
Canelo Alvarez Mhuri Kwakabva:
Nyika yeMexico yerudzi chena ine midzi yemhuri yeIrish yakatanga kusimudzwa kuguta rake rekuzvarwa kuGuadalajara.
Izvi zvakanga zvisati zvaitika mhuri yake yepakati yakatamira kuguta reJuanacatlán muJalisco kwaakakurira pamwe chete nevakoma vake vakuru Rigoberto, Gonzalo, Daniel, Ramon, Ricardo, Victor, Daniel, pamwe chete nehanzvadzi yake Ana.
Kukura papurazi remhuri yake kuJuanacatlanqu, mudiki Canelo aive akasununguka-akasununguka mwana aive nemutambo wekutanga wehudiki aive akatasva bhiza.
Panguva iyo Canelo aivepo, haana kumbofungidzira kukanda kana kuvharira zvibhakera mune ramangwana kunyangwe hazvo huwandu hwakakura hwehama dzake hwakanga hwaita mutambo wetsiva.
Canelo Alvarez Dzidzo uye Basa Kuvaka:
Parakazosvika bvudzi rakatsvuka Canelo akange ave zera re13 mu2003, akatanga kufinyama nemafungiro ekuva mutambi wetsiva nekuda kwekuti aida kwazvo kunzvenga vamwe vaimudzvinyirira vaiita senge vachivaka basa kubva mukumusvina pamusoro pebvudzi rake, madhiri uye ganda rakachenuruka.
Kuti aite izvozvo, akatanga kudzidziswa zvakasimba tsiva. Zvekare timu yekudzidzisa baba-mwanakomana yaJose 'Chepo' Reynoso nemwanakomana wake Eddy vakamudzidzisa.
Yakanga ichingova nyaya yemavhiki kudzidziswa kwacho kusati kwabira Canelo nguva yake uye kwakakanganisa dzidzo yake yechikoro chepamusoro.
Canelo Alvarez Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu Hupenyu:
Nhoroondo yehupenyu hwepakutanga hwaCanelo mumitambo yetsiva kumashure sa2004 paakarova nzira kuburikidza nevana vasina kusimba uye vakasimba vekirasi yake yekurema kurekodha kuhwina kwakawanda kusanganisira kukora menduru yesirivheri paJunior Mexican National National Championship, yakaitirwa muSinaloa.
Wechidiki Canelo akaenderera mberi achiva 2005 Junior Mexicoan National Boxing Champion pazera re15 uye akatendeuka nyanzvi gore rimwe chete nekuti pakanga pasisina chero muvengi akanaka junior akasiyiwa kwaari kuti atarise nepamusoro kana kurwisa zvakanyanya.
Canelo Alvarez Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Paakatendeuka pro, Canelo akadzivirira zvinyorwa zvake zvinooneka zvekutamba nekutanga giraundi rinotyisa rakasiya avo vaizozvipikisa achifunga kuti zvaive zvakanaka sei kuti vanyore kurashikirwa mumabasa avo.
Anoratidzika kunge asingakundike Canelo aive nedhirowa rake rekutanga muna 2006 - achipesana naJorge Suarez - akazonyora kurasikirwa kwake kwekutanga makore akazotevera munaGunyana 2013 paakatarisana Floyd Mayweather paMGM Grand Garden Arena Paradise muNevada, US
Canelo Alvarez Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Achienderera mberi kubva kuMayweather husiku hwehusiku uyo ​​akamuona akarasikirwa neWBA (Yakabatana), WBC, uye The Ring light middleweight mazita; Canelo akakunda katatu paakakwikwidzana vatatu vatambi vetsiva pamwe nekurongedza akashaikwa 'WBC' middleweight mazita kurwisa Puerto Rican boxer Miguel Cotto munaNovember 2015.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Canelo akahwina uye akachengeta mazhinji mazita nemukundi wake uchangoburwa kurwisa Daniel Jacob's muna Chivabvu 2019.
Zvichakadaro, Canelo anokwenenzverwa kuti arwe naSergey Kovalev munaNovember 2019 uye vateveri havagoni kumirira kuti vaone kana bout ichave dhirowa kana kurasikirwa zvakanyanya. Chero ipi nzira yavanotarisira kutarisira, vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Canelo Alvarez Ukama Hupenyu Chokwadi:
Pane zvinokwikwidza zviviri zvikamu zvevasina kuroora nyanzvi dzetsiva, ivo vasina kuroora uye avo vane hupfumi kufambidzana nhoroondo.
Canelo akasainira iyo yekupedzisira nekufambidzana nerunako nhatu - Nelda Sepulveda, Marisol Gonzalez naCynthia Rodriguez - asati asangana nemusikana wake - panguva yekunyora iyi bio - Fernanda Gomez.
Kunyangwe zvishoma zvichizivikanwa nezvekuti shiri dzerudo dzakatanga kufambidzana riini, vanga vari pamwe kubvira 2018 uye vanogona zvakare kutora hukama hwavo nhanho yekuwedzera nekuroora.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Canelo haana mwana naFernanda Gomez panguva yekunyora asi vanababa vana vatatu - vanasikana vaviri uye mwanakomana - kubva kuhukama hwakasiyana.
Canelo Alvarez Hupenyu Hwemhuri:
Canelo Alvarez anotenda kubva kune yepakati-yemhuri mhuri yepamberi. Ona zvese nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaCanelo Alvarez:
Santo valvarez ndibaba vaCanelo. Anorumbidza kubva kumhuri kumashure izvo zvishoma zvinozivikanwa nezvazvo uye akashanda semurimi panguva yehupenyu hwepamberi pebhokisi. Santos yagara iri pesvedzero yakanaka kuna Canelo uyo anomutora seyechokwadi baba baba.
Uye zvakare, anogara achishanyira kukambi yeCanelo yetsiva neyekupedzisira achimuvimbisa yekuwana kukunda mumitambo yake.
Nezve amai vaCanelo Álvarez:
Ana Maria Barragán ndiamai vaCanelo. Isu tinomutenda kuti ane mhuri yeIrish. Izvo zvinotsanangura chikonzero nei aine musoro mutsvuku uye akapa hunhu kuna Canelo.
Kunyangwe Ana akaparadzana nababa vaCanelo aine makore gumi nemashanu. Haana kumbobvira agura hukama hwaamai nemutambi wetsiva, sezvo kana mumwe wavo akakura kana kutama nekufamba kwemakore.
Nezve Canelo Álvarez hama:
Canelo angangodaro aine nhamba yakakura kwazvo yevanun'una mubhokisi rehunyanzvi.
Vakoma vake vatanhatu - Rigoberto, Gonzalo, Daniel, Ramon, Ricardo, Victor, Daniel - vakabatsira vabereki vavo mukurima pamwe nekutengesa popsicles uye ice cream vasati vapinda mubhokisi uye kuita basa risingakoshe mumutambo uyu.
Kwaari, hanzvadzi yaCanelo mukuru Ana bhizimusi mukadzi asina kana kumbove nenhoroondo nebasa retsiva asi anotsigira vakoma vake.
About Canelo Álvarez hama:
Kure nehupenyu hwemhuri hwaCanelo Alvarez, tinoziva zvishoma nezve sekuru nasekuru vake vaamai nababa.
Nepo pasina marekodhi aripo amainini vake, babamunini, babamunini, vazukuru nevazukuru vake.
Canelo Alvarez Hupenyu Hwega:
Achienderera kuhunhu hwaCanelo Álvarez inova imwe yeakanakisa munyika yetsiva, ane chinoshamisa uye chakashinga chimiro chinoratidza hunhu hwevanhu vanotungamirwa neCancer Zodiac maitiro.
Iye anehungwara mupfungwa, anoda chinzvimbo uye haawanzo kuratidza zvese nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvaanofarira uye zvekuseredza zvinosanganisira kukanda mabhiza, kutarisa mafirimu uye kushandisa nguva yakanaka munyika dzakavhurika neshamwari uye nemhuri.
Canelo Alvarez Mararamiro:
Iwe unoziva here kuti Canelo Álvarez ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora 100 miriyoni panguva yekunyora iyi bio? Nzvimbo dzenharembozha yake dzinotora mubairo kubva kumabhokisi ake ekuedza uye kuita zvibvumirano zvichiongororwa maitiro ake ekushandisa mari zvinoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kunongedzera zvinongedzo kuhupenyu hwoumbozha hwaCanelo hunosanganisira imba yake diki inozivikanwa kuGuadalajara inofungidzirwa kuti inokosha mamirioni emadhora pamwe nekuunganidzwa kwemotokari dzinodhura dzinosvika mamirioni masere.
Idzo mota dzinosanganisira Bugatti Chiron, Mercedes G63 AMG 6 × 6, Porsche 911 GT3, Lamborghini Gallardo pakati pevamwe.
Canelo Alvarez Chokwadi:
Kuunza yedu Canelo Alvarez yehucheche nyaya uye biography kumagumo pano zvinhu zvisina kutaurwa kana zvishoma-zvinozivikanwa zvakagadzirirwa kukubatsira iwe kuti utore mufananidzo wake.
Canelo Alvarez Tattoos: Bhokiseni anoda ma tatoo uye ane huwandu hwehizha hwemuviri paari. Akakurumbira pakati pehunyanzvi hwakadai mufananidzo wemwanasikana wake wekutanga Emily paruoko rwake pamwe neakakura mazwi ane chekuita nezveramangwana rakanyorwa kumusana kwake.
Canelo Alvarez Chitendero:
Canelo haasi wechitendero uye haasati achizopa mazano pamusoro pezvaanotenda pakunyora.
Pamusoro pazvo, haana kutaura mashoko kana mafambiro anomusiya semunhu asingatendi. Saka, chinzvimbo chake chenyaya dzekutenda chiri pane imwe nzvimbo pakati pekuvanzika uye kutarisisa pane zvetsiva.
Nezve Canelo Alvarez Nickname:
Vatsigiri vakaita Canelo kuve zita remutambi nguva pfupi yadarika. Kusiyana neizvi, zita rekuti "Canelo" ndiro Spanish uye rechirume musiyano wezwi Cinnamon iro riri zita remadunhurirwa rinozivikanwa pakati pevanhu vane vhudzi dzvuku.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Canelo Alvarez Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira patinenge tichiendesa Biography ye Professional Boxers.